Masinina fanapahana baoritra
Ampiasaina indrindra amin'ny fanapahana sy fanapahana baoritra, tabilao fotsy, sns. Izy io dia fitaovana ilaina amin'ny fonosana boky sy boaty fanomezana ambony.
Milina fanenomana divay
168 senes tsindry divay milina bubble dia araka ny fangatahan'ny mpanjifa dia ny famolavolana fitaovana vaovao ho an'ny famolavolana boaty fanomezana amin'ny taratasy, bubble amin'ny rivotra ambonimbony, fiketronana, fanodinkodinana, ary baoritra volamena sy volafotsy, tsy dia tsara ny effets adhesive taratasy manokana, ny ravin'ny taratasy gorodona sy ny olana hafa milina fitoviana.
Masinina sisiny efatra
Amin'ny boaty divay matihanina, boaty fanomezana, karazana boaty dite ary andiam-paosy fonosana volondavenona.
Masinina chamfering manual
Ny famolavolana ity milina ity dia tantara, mifono, azo antoka, mateza ary mora tazonina.
Ny fonosana fonosana 211 dia mifanaraka amin'ny tinady amin'ny tsena dia ny fampivoarana fitaovana vaovao, ny varingarina avo lenta, wo Chuan PLC Taiwan fanaraha-maso maso ny efijery wemview, ny fanitsiana ny parameter.
Mihodina mihodina mihodina milina fanamainana
Rafitra fanalefahana mandeha ho azy: miaraka amin'ny fanaraha-maso ny fihenjanana, fahombiazana avo lenta ary fitoniana tsy misy fiatraikany.
Masinina manamarika boaty manamarika boaty misy robot
Ny masinina ho an'ny boaty fanomezana, boaty fonosana, boaty vita tanana vita amin'ny famokarana tsipika fanangonana, ny fanary dia mahatsapa ny famoronan-tsolika, ny sofina mivalona, ​​ny fanesorana ny bubble ary ny famolavolana ary ny fametahana sy ny fitohizan'ny asa, dia afaka mamonjy fotoana betsaka sy artifisialy, manatsara ny famokarana. ny vokatra dia ny famokarana ny vokatry ny safidy ho an'ny famokarana boaty fonosana ho an'ny orinasa.
Masinina miboiboika mandeha ho azy lohan-doha
Afaka ampiarahina tsara amin'ny milina boaty mandeha ho azy sy ny tsipika fivoriambe semi-mandeha ho azy.
Ao amin'ny tsenan'ny indostrialy ankehitriny, mba hanatsarana ny fifaninanana amam-bika sy fampidirana fitaovana mandeha ho azy dia nanjary fironana lehibe amin'ny fampiroboroboana ireo orinasa ao amin'ny orinasa famonosana.
Masinina haingam-pandeha haingam-pandeha haingam-pandeha haingam-pandeha (Lakaoly miorina amin'ny rano / lakaoly menaka / sarimihetsika efa voaravaka)
Ity dia milina fanamainana am-baravarankely maro karazana, amin'ny alàlan'ny fanamainana sy fanindriana ny roller vita amin'ny vy laminating mba hametahana ilay sary mihetsika amin'ny taratasy mifatotra. Ny vokatra lamination tsara dia azo tratrarina ary mihena ny vidiny.
Masinina haingam-pandeha haingam-pandeha UV Spot (Function Dual, ho an'ny taratasy matevina sy manify).